NYI LYNN SECK 18+ DEN: Myanmar Blogger Survey 2009
Posted by NLS at 2/03/2010 11:30:00 PM
2 Responses to “Myanmar Blogger Survey 2009”
This is result. How about your conclusion.
ပန်းရောင်ဘက်အရောင်တွေ နဲနဲဆင်နေတယ်။ သေချာလိုက်ကြည့်ရတယ်။ မကွဲပြားဘူး။ အကွက်အသေးကလေးမှာ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတယ် အရောင်တွေ